हनीगाइड- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
असार १०, २०७३ विजय तिमल्सिना
काठमाडौं — हनीगाइड चराको नाम हो । तर, यहाँ चर्चा गर्न लागिएको मोबाइल एपको हो । यस्तो एप जसले ट्रेकिङ गर्नेहरूलाई रुटको मात्र होइन, सबै थोकको जानकारी दिन्छ । सबै थोक भन्नाले ? भन्नाले ट्रेकिङ गएको ठाउँको सम्पूर्ण जानकारी, त्यसको इतिहास र संस्कृति, त्यसअघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी र आपत्विपत् परे सम्पर्क गर्न सकिने ठाउँको सबै जानकारी ।
घुम्न जान सिफारिस गर्ने र घुम्ने ठाउँको रुटको जानकारी दिने बुक, म्यागेजिन र वेबसाइट धेरै पाइन्छ ।
हनीगाइडका एप तीभन्दा किन फरक छ ? हनीगाइडका संस्थापकमध्येका एक अभिषेक पाण्डे भन्छन्, ‘यो अफलाइन चलाउन मिल्छ र एउटा एपमा एक ठाउँको मात्र जानकारी छ ।’ हनीगाइडका तीन एपहरू गुगल र आईओएस स्टोरमा उपलब्ध छन् । तीनै एप फरक फरक ट्रेकिङ रुटको लागि हुन् । एभरेस्ट बेस क्याम्प, अन्नपूर्ण बेस सर्किट र घोरेपानी पुन हिल ट्रेकिङ रुटका लागि छुट्टाछुट्टै एप तयार छन् ।
संस्कृति र इतिहासमा रुचि राख्ने पाण्डे चरा र प्रकृतिप्रेमी साथी आशिष श्रेष्ठसँगको सहकार्यले ट्रेकिङ र टुर गाइडबुक एप योजना साकार भएको हो । उनीहरूको दुवैले खोलेको कम्पनी हनीगाइड प्रालिको नामबाट एपको ब्रान्डिङ गरिएको छ । एपमा राखिएको जानकारी हेर्दा जोकोही पनि प्रभावित हुन सक्छ । कसरी बटुलियो जानकारी ? पाण्डे भन्छन्, ‘हरेक ठाउँमा दुई–तीन पटक पुगेर तथ्यांक संकलन गरिएको हो ।’
हनीगाइडमा राखिएको ट्रेकिङ रुटबारेको जानकारी किन पनि विशेष छ भने यसमा सरसर्ती रुट र बस्नेखाने ठाउँको मात्र जानकारी छैन । हरेक ट्रेकिङ रुटको छुट्टाछुट्टै रुट, त्यसका लागि लाग्ने समय, त्यहाँको मौसम, बाटोमा पर्ने हरेक हिमाल र गाउँको जानकारी, ती गाउँमा पाइने वनस्पति, जनावर र तिनको जानकारी साथै हरेक ठाउँमा भएका होटल र त्यहाँ भएका सुविधा अनि त्यसलाई सम्पर्क गर्ने माध्यम एपमा समावेश छन् ।
जस्तो : एभरेस्ट बेस क्याम्प ट्रेक गर्नेले एपको मेनुमा गएर आइटीनेरी छान्न सक्छन् । जसमा चार वटा ट्रेक रुटको जानकारी छ र लुक्लापछि आउने चेप्लुङ, ठाडोकोसी, घाटजस्ता सबै ठाउँको पालैपालो जानकारी एपमा छ र हरेक ठाउँबाट देखिने हिमालको तस्बिर र त्यसको जानकारी, त्यो ठाउँको खाना, संस्कृति, किंवदन्तीसहित स–साना कुराको समेत जानकारी राखिएको छ । स्मार्टफोनको जीपीएस अन गरेर ट्रेकिङ रुटमा हिँड्नेहरूलाई अर्को सुविधा पनि छ ।
रुटभन्दा गलत बाटोमा २ सय मिटर पर गएपछि यसले गलत बाटो हिँडेको नोटिफिकेसन प्रयोगकर्तालाई दिन सक्छ । जसले गर्दा लामो यात्रा गर्दा बाटो भुलिने र हराउने डर भएन । ट्रेकिङ जाँदा आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, सुरक्षा किटदेखि आपत्मा परे उद्धार गर्ने निकायको सम्पर्क नम्बरसमेत राखिएकाले यो उपयोगी बनेको छ । एभरेस्ट बेसक्याम्प, अन्नपूर्ण बेस सर्किट र घोरेपानी पुनहिल घुमेर र ती ठाउँको संस्कृति र इतिहासबारेको जानकारी समेटेर एप तयार पारिएको पाण्डेले बताए ।
भन्छन्, ‘एप प्रयोग गर्नेहरूलाई गाइडको कम आवश्यकता हुन्छ ।’ ट्रेक रुटमा पर्ने ठाउँमा २०७१ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले पारेको प्रभावबारेको अपडेट पनि एपमा समावेश छ । आगामी वर्ष मनास्लु र लाङटाङ ट्ेरकिङ रुटको एप तयार पारिसक्ने हनीगाइडको योजना छ । पाण्डे भन्छन्, ‘नेपालको ट्रेकिङ रुटबाहेक भारतको सिक्किम र लद्दाक साथै युरोपको वेल्सका ट्रेकिङ रुटबारे यस्तै गाइडबुक एप बनाउने योजना छ ।’ साथै, सिटी टुर एपको योजना पनि उनीहरूसँग छ ।
गत वर्षको अक्टोबरमा रिलिज भएका हनीगाइडका तीन एप अहिले नि:शुल्क डाउनलोड गर्न मिल्छ । तर, अर्को महिनादेखि पेड एप बनाउने योजना भएको पाण्डे सुनाउँछन् । यही उनको रेभेन्यू मोडल पनि हो । एप सार्वजनिक भएको एक वर्ष नपुग्दै एभरेस्ट बेसक्याम्पमा खुलेका नयाँ होटल र लज सञ्चालकहरूले आफ्नो होटलको जानकारी पनि एपमा राख्न अनुरोध गर्दै गरेको फोनले उत्साहित छन् पाण्डे । भन्छन्, ‘एप बनाउन सोचेभन्दा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । राम्रो रेस्पोन्सले खुसी छौं ।’
प्रकाशित : असार १०, २०७३ ११:३९
कालोपोथी के हो ? के हैन ?
नयाँ–पुराना दर्शक तान्न सफल ‘कालोपोथी’ ले यतिबेला फिल्म वृत्तमा थुप्रै बहस जन्माएको छ ।
असार १०, २०७३ सुशील पौडेल
काठमाडौं — मलाई एउटा स्टोरी भन्नु थियो । अनुभव अभिव्यक्त गर्ने बाटो खोजिरहेको थिएँ । त्यसैको उपज हो, ‘कालोपोथी’ निर्देशक मीनबहादुर भामले आफ्नो पहिलो फिल्मको रचना गर्भबारे सुनाए । केही सातादेखि हलमा नयाँ–पुराना दर्शक तान्न सफल ‘कालोपोथी’ ले यतिबेला फिल्म वृत्तमा थुप्रै बहस जन्माएको छ । फिल्म राम्रा बनेर मात्रै हुँदैन, हेर्ने दर्शक पनि उत्तिकै शिक्षित हुनु जरुरी छ ।
मलाई एउटा स्टोरी भन्नु थियो । अनुभव अभिव्यक्त गर्ने बाटो खोजिरहेको थिएँ । त्यसैको उपज हो, ‘कालोपोथी’ निर्देशक मीनबहादुर भामलेआफ्नो पहिलो फिल्मको रचना गर्भबारे सुनाए । केही सातादेखि हलमा नयाँ–पुराना दर्शक तान्न सफल ‘कालोपोथी’ ले यतिबेला फिल्म वृत्तमा थुप्रै बहस जन्माएको छ । फिल्म राम्रा बनेर मात्रै हुँदैन, हेर्ने दर्शक पनि उत्तिकै शिक्षित हुनु जरुरी छ ।
रिलिजको तेस्रो सातामा पनि ‘कालोपोथी’ का हल ‘हाउसफुल’ हुनुले नेपालमा फिल्म चेतको विकास हुँदैछ भन्ने संकेत पनि हो । फिल्म समीक्षक दीपेन्द्र लामा निर्देशक मीनलाई ‘कालोपोथी’ बाट फिल्म सिद्धान्त प्रतिपादनको दिशातर्फ उन्मुख देखिएको मान्छन् । दीपेन्द्रले फिल्ममा दृश्य भाषालाई सशक्त मान्दै भन्छन्, ‘मीनले भूगोल, कथा, परिवेश र पात्र मनोविज्ञान अनुसार भिजुअल क्रिएसन गरेको देखिन्छ । नत्र हामीकहाँ प्राय: टेक्स्टलाई फोकस गर्ने तर भिजुअल ल्याङवेज निर्माणको अभ्यास गरेको पाइँदैन ।’
मीनले नै अविनाशविक्रम शाहसँग सहकार्य गरी तयार पारेको फिल्मको पटकथाले दुई बालसखाको कथा बोल्छ । मुगुका दुई बालक जो कथित उपल्लो र तल्लो जात अनि धनी र गरिब दुई वर्गमा विभक्त भईकन पनि एक छन् । एक बनाएको छ, मित्रताले । ‘कालोपोथी’ यही सामान्य मित्रताको मूल कथा हो । जून मित्रतामा विगतको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, सामाजिक ढर्रा बाधक बनेर आउँछन् ।
कुखुराको पोथी दुईको मित्रता मापक यन्त्रका रूपमा फिल्ममा त छ नै, सेतोलाई कालो माटो पोतेर बिम्बात्मक रंग पनि दिन खोजेका छन्, निर्देशक भामले । कुनै बेला ‘लुट’ बाट निर्देशक निश्चल बस्नेतलाई स्वदेशी फिल्ममा नयाँ कथ्य संरचना भित्र्याएको जश दिइएको थियो । उनै निश्चल यतिबेला मीनलाई सराहना गरिरहेका छन् । ‘यस फिल्ममा स्टोरी लाइन जसरी बगाइएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ । सब–प्लट छन् तर मेन–प्लटबाट टाढा भागेका छैनन् ।
नत्र हाम्रोमा समस्या भनेकै सुरु गरेको कथा अन्त्यमा कता पुगेर टुंगिन्छ भन्ने हुन्छ ।’ यसअघि पनि सर्टफिल्म ‘बाँसुल्ली’ बनाइसकेका मीनले यथार्थपरक शैलीमा ‘आर्टिस्टिक अप्रोच’ को बाटो समातेको निश्चल ठान्छन् । ‘कर्णालीमा सुन्दर दृश्य कति थिए होलान् । रारा ताल नै कति सुन्दर लाग्छ । तर निर्देशकले लोकेसनको सुन्दरतालाई महत्त्व नदिई पात्रको कथा र भावनामा फिल्मलाई अघि बढाएका छन् र यसै कारण पनि उनी दर्शकलाई बाँधिरहन सफल छन् । स्टोरीबाट डाइभर्ट नहोस् भनेर अपनाइएको चलाखी सफल देखिएको छ’ निश्चलले तारिफमा बोले ।
‘कालोपोथी’ को तारिफ नेपाल रिलिजपछि मात्रै भएको भने हैन । स्क्रिप्ट उत्कृष्ट भएकै कारण स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीका फिल्म कम्पनीबाट झन्डै दुई करोड रुपैयाँ फिल्म निर्माणार्थ पाएको थियो । विश्वका नामी फिल्म फेस्टिभलमा प्रशंसा बटुलिसकेको ‘कालोपोथी’ ७२ औं भेनिस फिल्म फेस्टिभलमा क्रिटिक्स विकतर्फ उत्कृष्ट मानिएको थियो । फेस्टिभल र समीक्षकका नजरमा उत्कृष्ट ठहरिएको ‘कालोपोथी’ यतिबेला व्यावसायिक रूपमा पनि सफल बनेको छ ।
बिनास्टार बनाइएको फिल्मले नै मुगुका दुई बालक खड्काराज नेपाली र शुक्रराज रोकायालाई ‘स्टार’ बनाइदिएको छ । ‘फिल्म हेरेर निस्कँदा समय खेर फालियो भन्ने मलाई कुनै पछुतो रहेन’ निर्देशक मनोज पण्डितले कान्तिपुरसँग अनुभव साटे, ‘ती दुई मुख्य चरित्रसँग मेरो आत्मीयता गाँसियो । ‘कालोपोथी’ मेरो फिल्मको सूचीमा राम्रो फिल्मको कोटीमा पर्छ ।’ उनले मुगु क्षेत्रको कथा, पृष्ठभूमि, सेटिङ र न्यारेटरले फिल्मसँगै बगाएको टिप्पणी गर्दै दुई पात्रसँग पहिल्यैदेखि परिचित हो कि जस्तो अनुभूति गराएको टिप्पणी पनि गरे ।
निश्चलचाहिँ फिल्मको कलर ग्रेडिङलाई बढी सशक्त मान्छन् । ‘फिल्मको रंग आँखालाई शीतल हुने गरी ‘डर्टी वार्म टोन’ मा राखिएको छ । त्यसबाहेक सिनेमाटोग्राफी अर्थपूर्ण हिसाबले खिचिएको छ,’ त्यसो त निश्चलले फिल्म अझै राम्रो बन्न सक्नेतर्फ औंल्याउँदै स्थानीय पात्रमा थप समय खर्चेर परिस्कृत पार्न सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने तर्क गर्छन् । त्यसो त मनोज पण्डित पनि मुख्य चरित्रसँग भावनात्मक रूपले जोडिए पनि उनीहरूको संघर्ष र त्यसको बैठानप्रति खासै सहमत देखिँदैनन् ।
भन्छन्, ‘मलाई जति पात्रसँग परिचित गरायो, त्यति उनीहरूको पोथीसँगको सम्बन्धमा म भावनात्मक हुन सकिनँ,’ फिल्ममा समालोचनात्मक टिप्पणी पनि गर्ने मनोजले आफूलाई थप प्रस्ट्याउँदै भने, ‘फिल्मले पोथी हराउँदा पात्रको असन्तुलित अवस्थालाई देखाउन र त्यसबाट पार पाउन चरित्रले गर्ने संघर्षमा मिहिनता पाउन सकिनँ । सिनेमाटिक उतारचढाव सिर्जना गराएन ।’ उनले माओवादी युद्धले दुई पात्रबीचको मित्रता र संघर्षमा द्वन्द्व ल्याउँछ भनेर खोजिरहँदा उत्तर पाउन नसकेको बताए ।
मनोजले निर्देशकीय पाटोको भने प्रशंसा गर्दै भने, ‘निर्देशक आग्रह/पूर्वाग्रह नराखी बिनाहस्तक्षेप कथा भनिएको छ । निर्देशक प्रो–रियाक्टिभ नभई नन–अट्याचमेन्ट अवधारणामा आफ्नो कुरा भन्न सक्नु मीनको सफलता हो ।’ यतिबेला मीनबहादर भामलाई सन्तोष सिभान निर्देशित फिल्म ‘तहान’ बाट प्लट चोरी गरी ‘कालोपोथी’ बनाएको सम्मका आरोप लागेका छन् । थुप्रै अवार्ड जितेको ‘तहान’ मा पनि एक बालक आफ्नो बेचिएको प्रिय गधालाई आफ्नो स्वामित्वमा फर्काउन गर्ने संघर्षपूर्ण यात्रा कथा हो ।
उक्त यात्रा दौरान आठवर्षे उक्त बालकले काश्मीरको द्वन्द्वलाई पृष्ठभूमिमा भोग्छ । मीन भने यसलाई मान्न तयार छैनन् । ‘कालोपोथी’ मेरै आफ्नो बाल्यकालको स्मरणबाट प्रभावित फिल्म हो । त्यसबाहेक कुनै फिल्मबाट म प्रभावित छैन’ त्यसो त मीनले भारतकै प्रतिष्ठित पाँच फिल्म फेस्टिभलमा देखाउँदा पनि ‘तहान’ वा अरू कुनै फिल्मबाट ‘मिलेको’, ‘चोरेको’ वा ‘प्रभावित’ भन्ने नसुनेको भन्दै बोले, ‘विश्वभरकै फेस्टिभलमा कतिले हेरिसके, हेरिरहेका छन् । सबैतिर प्रशंसा नै भयो । तर यस्तो आलोचना यहीं सुन्दैछु ।’
समीक्षक दीपेन्द्र तर्क गर्छन्, ‘त्यसो त संसारकै लभस्टोरी फिल्मका प्राय: कथा मिल्छ । नेपाल र भारतमा बन्ने फिल्मको संरचना नै महाभारत र रामायणसँग प्रभावित छन् ।’ निश्चललाई पनि लाग्दैन, ‘कालोपोथी’ मौलिक हैन । ‘कपीजस्तो लाग्दैन । फिल्ममा आफ्नोपन कसरी दिएको छ भन्ने मुख्य हो । द्वन्द्वकालको समयमा त्यो ठाउँमा त्यहींका पात्रले गर्ने संघर्षको कथाको प्रस्तुति हेर्दा बाहिरको कथाजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।
प्रकाशित : असार १०, २०७३ ११:५४